सावधान! उपरखुट्टी लगाएर बस्नु हुनसक्छ यति हानिकारक – newslinesnepal
सावधान! उपरखुट्टी लगाएर बस्नु हुनसक्छ यति हानिकारक
प्रकाशित मिति : २४ असार २०७५, आईतवार ०५:०५
खासगरी आफुभन्दा ठूलाबडा, गन्यमान्य व्यक्तिको सामुन्ने ‘उपरखुट्टी लगाउनु’लाई शोभनिय मानिदैन । उपरखुट्टी भनेको एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा चढाएर बस्नु ।किन यसो भनिएको होला रु जसरी बसेपनि के भो र रु बसाईको पोजिसनले पनि आदररअनादर जनाउँछ र?हाम्रो मनमा यस्तै प्रश्न उठ्थ्यो । आखिर उपरखुट्टी लगाउँदैमा किन अरुलाई टाउको दुख्नुपर्ने?खासमा पूर्खाहरुले जे जस्ता शिष्टचारका कुराहरु गरे र त्यसलाई पालना गराउने अनेक यत्न गरे, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै रहस्य हुन्थ्यो ।
त्यसको वैज्ञानिक कारण हुन्थ्यो । तर, हामीले ठान्यौं, बुढाहरुको आडम्बरी कुरा हुन् यी ।जबकी वर्तमान समाजमा सभ्यताको कुरा गर्दा हामी त्यही शिष्टचार पालना गर्न बाध्य छौं, जो हिजो हामीले लत्याएका थियौं । हाम्रा पिता(पूर्खाले सिकाएको शिष्टचारलाई हामीले ‘पुरानो सोंच’ भनेर उडाएपनि आज त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई हेक्का हुँदैछ ।खासमा पिता(पूर्खाले जे(जति कुराहरु गरे र आफ्ना पुस्तालाई त्यसमा अभ्यस्त गराउन खोजे, त्यो कुनै ‘वाहियात’ कुरा थिएन । ‘बेकारका बात’ थिएन । आडम्बर थिएन । ढोंग थिएन । त्यसको कुनै न कुनै अर्थ थियो ।के रहेछ त अर्थ ?खासमा खुट्टा क्रस गरेर वा उपरखुट्टी लगाएर बस्नुसँग शिष्टचारको कुरा किनपनि जोडिएको रहेछ भने, यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेछ ।
उपरखुट्टी लगाएर बस्नुको हानिकारक प्रभाव शरीरमा पर्छ । हुन त हामी यसलाई स्टाइलको वा आरमको रुपमा लिन्छौं । कतिपय अवस्थामा आफुलाई ठूलो देखाउन पनि हामी उपरखुट्टी लगाउँछौं, तर यो पोजिसन सही होइन ।यसरी उपरखुट्टी लगाएर बस्दा पेरोनोल नर्वमा दबाब पर्छ । साथै खुट्टाको नसामा त्यसले दबाब पैदा गर्छ । यसले मांशपेसीलाई संकुचित गराउँछ । र, अस्थायी प्यारालाइसिसको संभावना बढाइदिन्छ ।यसको असर खुट्टामा मात्र पर्ने होइन । यसले गर्दन र ढाँडमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
भेरिकोज भेन्समा नसा बढेको हुन्छ । कुनैपनि नसा भेरिकोज भेन्स नै हुनसक्छ । तर सबैभन्दा प्रभावित नसा हाम्रो खुट्टा र खुट्टाको पञ्जामा हुन्छ । त्यही कारण उभिदा वा घुम्दा हाम्रो तल्लो भागको नसामा दबाब बढ्छ । भेरिकोज भेन्स सामान्यत छालाको सतहमा देखिने निलो नसा हो । कहिले काहीँ यसले गंभिर समस्याको रुप लिन्छ ।हुन त चिकित्सकहरु अझैपनि यसमा स्पष्ट छैनन् कि, उपरखुट्टी लगाउँदा त्यसले भेरिकाज नसाको कारण बन्छ कि बन्दैन । यद्यपी अधिकांश चिकित्सकले के भन्ने गरेका छन् भने, उपरखुट्टी लगाएर बस्दा त्यसले रक्त प्रवाहमा नराम्ररी असर पुर्‍याउँछ ।